Media - pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Keyword: haino aman-jery
Momba ny ankizy, fahitalavitra, streaming, finday avo lenta ary tsy voafehy intsony
Mazava ho azy, tsy azoko lavina fa ny fahita lavitra dia tsy mandeha matetika isaky ny indraindray. Tonga saina ianao satria kivy noho ny asa ary te-hametraka ny tongotrao fotsiny hiala sasatra. Inona no tsara kokoa noho ny sarimihetsika mahafinaritra na andiana?
Fijerena fahitalavitra sy ireo safidy hafa
Rehefa tonga tamin'ny taona tsy naha teo am-pandriana intsony tamin'ny fito taona ny zanakay vavy, fa nilalao ela kokoa tao amin'ny efitrano fandraisam-bahininay, dia tsikaritray fa nanamboatra bebe kokoa tamin'ny fahitalavitra izy, izay mazava ho azy fa tsy dia tsara loatra ho anay tianay .
Mijery fahitalavitra sy ireo fomba hafa - Sary avy amin'i René Schindler amin'ny pixel
Vetivety dia nampiadana izany izahay tamin'ny alàlan'ny tsy fandefasana televiziona tsotra izao raha mbola tao amin'ny efitrano izy ny hariva.
Nandritra izany fotoana izany dia nitady vahaolana marimaritra iraisana izahay. Nazava taminay fa tsy afaka mandrara tanteraka ny fahitalavitra amin'ny fiainan'izy ireo izahay.
Avy amin'ny sekoly fanabeazana fototra "Momba ny ankizy, fahitalavitra, streaming, finday avo lenta ary very fanaraha-maso" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 23. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fampianaranaKeywords Hijery tele, TV, haino aman-jery, Fanjifana haino aman-jery, finday avo lenta, StreamingLeave a Comment hatramin'ny Avy amin'ny ankizy, fahitalavitra, streaming, smartphone ary tsy voafehy intsony